उडिरहेको विमान अचानक हाल्लियो, ३५ यात्रु घाइते::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं – क्यानडाको भ्यान्कुभरबाट अस्ट्रेलियाको सिड्नीतर्फ उडिरहेको विमान अचानक सघन ुटर्बुलेन्सु मा परेपछि बिहीवार ३५ जना यात्रु घाइते भएका छन्। चलनचल्तीको भाषामा टर्बुलेन्स भनिने हावाको तापक्रम तथा अन्य कारणले उत्पन्न हुने अवस्थामा उडिरहेको विमान पर्दा निकै हल्लन्छ। सो विमानमा २८४ जना सवार थिए।
टर्बुलेन्समा परेपछि सो विमान हवाइमा अवतरण गराइएको थियो। होनोलुलुको विमानस्थलमा अवतरण गर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यात्रुको जाँच गरेका थिए।
विमानसेवाले जनाए अनुसार हवाइ टापुभन्दा दुई घण्टा पर पुगिसकेको सो विमानले अचानक सफा आकाशमै बेतोडको टर्बुलेन्स बेहोरेको थियो।
यसलाई नाङ्गो आँखा वा परम्परागत रेडारले पनि पत्ता लगाउन सकिँदैन। विमानचालकहरूले सोही स्थानबाट उडेका अन्य विमानले एअर ट्राफिक कन्ट्रोललाई दिएका जानकारीका आधारमा मात्र यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको ठाउँ थाहा पाउन सक्छन्। बिबिसी
प्रचण्डले बुहारी मन्त्री बिना मगरका लागि यतिसम्म गरे !
ओली सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता, खुला लडाइँमा उत्रिए यी मुख्यमन्त्री !